लामो समयको अन्तरमा कोरोनाको दोस्रो डोज खोप लगाउँदा काम गर्छ कि गर्दैन ? यस्तो छ वास्तविकता — Sanchar Kendra
लामो समयको अन्तरमा कोरोनाको दोस्रो डोज खोप लगाउँदा काम गर्छ कि गर्दैन ? यस्तो छ वास्तविकता
काठमाडाैं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले धेरै समयका अन्तरमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउँदा पनि प्रभावकारी हुने जनाएको छ । मन्त्रालयले ‘कोभिशिल्ड’ खोपको पहिलो मात्रा लगाएको लामो समयका अन्तरमा अहिले ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो मात्रा लगाउन थालिएकाले उक्त खोपले काम गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।